Camille Vital sy Augustin Andriamananoro:NAMPIGADRA MPANAO GAZETY MIISA DIMY -
AccueilRaharaham-pirenenaCamille Vital sy Augustin Andriamananoro:NAMPIGADRA MPANAO GAZETY MIISA DIMY
Iny fitondrana Tetezamita iny no nampigadra mpanao gazety be indrindra. Mbola iny fitondrana notarihin-dRajoelina Andry sy ry Augustin Andriamananoro iny koa no nanakatona onjam-peo be indrindra ( Radio Mada, Radio Fahazavana, Radio Fototra, Mbs, …). Raha mikasika ny mpanao gazety manokana, dia isan’ireo nitondra faisana tamin’izany ny mpanao gazetin’ny Radio Fahazavana. Mpanao gazety miisa dimy no nogadrain-dry Augustin Andriamananoro sy Camille Vital tamin’izany. Isan’izany ry Ranaivo Josiane, Ratsimba Solomon (Lolot Ratsimba), Raveloarison Philémon, Randrianarijaona (Jaona Raoly), Soavinarivo Tiburce . Notanana am-ponja nandritra ny 110 andro izy ireo. Izany hoe nandritra ny telo volana sy tapany. Amin’izao fotoana moa dia mbola misy tamin’izy ireo no nijanona ho mpanao gazety ary nisy kosa ny lasa any amin’ny sehatr’asa hafa. Ankoatra azy ireo dia notanana am-ponja ihany koa ny teknisianin’ny Radio Fahazavana miisa roa Maharavo Tiana sy Andrianasolo Andry ary mpiambin-tanàna iray antsoina hoe Rakotoson Tsivoho .
Ny tantara tsy fanadino ary tsy fomban’ny Malagasy ny manao ririnin-dasa tsy tsaroana. Ingahy Augustin Andriamananoro izay minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitry ny fitondrana Tetezamita no nanome baiko tamin’ny fisamborana. Fanohintohinana ny filaminam-bahoaka, tahaka io heloka hanenjehana azy ankehitriny io mihitsy ilay nanenjehana ireto mpanao gazetin’ny Radio Fahazavana ireto tamin’izany. Ny tsy nampitovy azy, dia tamin’ny fomba feno herisetra no nisamborana an’ireto mpanao gazety sy mpiasan’ny Radio Fahazavana ireto. Tao anaty horohoro sy fampiasan-kery, niampy fandrobana ny fananan’ilay radio mihitsy.
Ny alin’ny 20 Mey 2010 no nitrangan’izany. Camille Vital no praiminisitra tamin’izany ary Nathalie Rabe no minisitry ny Fifandraisana . Baiko avy any amin’ingahy Praiminisitra Camille Vital moa no tanterahin’i Augustin Andriamananoro tamin’io. Mazava araka izany fa ry zareo ireo no nampisambotra an’ireto mpanao gazety sy teknisiana tamina onjam-peo tsy nitovy firehana taminy ireto.
Raha ny fitantaran’ireo niharan’ny fisamborana, dia tao anaty herisetra tanteraka no nanatanterahan’ny miaramilan’ny FIS tamin’izany ny fisamborana. Taorian’izay dia notanana andro maromaro teny amin’ny BC Anosy. Tsy nahazo fitsimbinana manokana izany na dia mpanao gazety aza fa nafangaro tamin’ny mpangalatra sy ny mpamono olona tao amin’ny borigady misahana ny Heloka bevava tetsy Anosy.
Nahazo tombony manokana ingahy Augustin Andriamananoro raha nampitahaina tamin’ny zavatra nataony tamin’izany. Mbola afaka niantso mpanao gazety sy mpisolovava azy izy tamin’ny fotoanan’ny fisamborana azy teny Itaosy iny. Lavitr’izany herisetra sy habibiana rehetra izany. Tena tsy mitovy tamin’ny fisamborana tamin’izany volana Mey 2010 izany. Anio moa no andeha etsy Anosy ity raharaha Augustin Andriamananoro ity.
Fantatra àry izao fa ny lehiben’ny kabinetra sivilin’ny praiminisitra, Constant Rakototafika ihany no mikotrika ny grevy eo anivon’ny JIRAMA. Mambra ao amin’ny filan-kevi-pitantanan’ny JIRAMA ny tenany sady mpitondra tenin’ny sendikan’ny mpiasa rahateo koa kanefa mitàna ...Tohiny